महिलालाई अगाडि नसारी काङ्ग्रेस बलियो हुँदैन : सुजाता कोइराला |
महिलालाई अगाडि नसारी काङ्ग्रेस बलियो हुँदैन : सुजाता कोइराला
प्रकाशित मिति :2015-11-20 14:29:52
नेतृ सुजाता कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवार बन्ने सोचमा हुनुहुन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस बलियो बनाउन समाजमा रहेका ५१ प्रतिशत महिलालाई उपयुक्त स्थान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुने नेतृ कोइरालाले महिला खबर डटकमका लागि अरुणा रायमाझीसँग गरेको कुराकानी ।
१३औँ महाधिवेशनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले विधान संशोधन गर्न लिखित सुझाव मागेको छ । तपाईंका सुझाव के–के छन् ?
नयाँ संविधानमा महिला, जनजाति, दलित, आदिवासी, मधेसीलगायतका वर्गका लागि छुट्याइएको आरक्षणको व्यवस्था पार्टीको विधानमा लेखिनुपर्छ । केन्द्रमा ३३ प्रतिशत र प्रदेशमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा विधानमै किटान गरेर जानुपर्छ । अर्को, पार्टीमा क्रियाशीलभन्दा निष्क्रिय मानिसलाई सदस्यता वितरण रोकिनुपर्छ, जुन अहिले भइरहेको छ । काङ्ग्रेसको सदस्यता प्राप्त गर्न कम्तीमा पनि पाँचदेखि सात वर्षसम्म पार्टीमा योगदान पु-याएको हुनुपर्ने प्रावधान विधानमा उल्लेख हुनुपर्छ ।
आफू सुरक्षित हुने नाममा पार्टीनीति नै नबुझेकालाई सदस्यता वितरण गरिएको छ । यो सिद्धान्तविपरीत कुरा हो । यसले पार्टी बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ । यहाँसम्म कि एउटै घरका सम्पूर्ण परिवार, जसले पार्टीमा योगदानै गरेको छैन त्यस्तालाई पनि सदस्यता दिइएको छ । यो बिलकुलै गलत हो । यी मेरा सुझाव हुन् ।
आरक्षणको व्यवस्था विधानमै हुन्छ कि हुँदैन ?
पछाडि पारिएको वर्गको विकासका लागि कम्तीमा पनि १५ वर्षसम्म पार्टीले आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यो वर्ग आफैँ अगाडि आउँछ ।
१३औँ महाधिवेशनले सङ्गठन र नेतृत्व परिवर्तन गर्ला ?
पार्टी अब पुरानो तरिकाले चल्दैन, नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ । परम्परावादी सोचले नयाँ पुस्तालाई समेट्न सकिँदैन । यो महाधिवेशनले युवा र नयाँ विचारसहितको नेतृत्व ल्याउनुपर्छ, जसले देश–विदेशको राजनीतिलाई समेत बुझेको छ । नेतृत्व अब नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । जसले पार्टीको मात्र होइन, मुलुकको नेतृत्व गर्न सकोस् ।
सभापति पदमा तपाईंले उम्मेदवारी दिने कुरा साँचो हो ? जित्ने नै योजना छ कि अन्य पदका लागि बार्गेनिङ मात्रै हो ?
हो, उम्मेदवारी दिने सोचमा छु । पार्टी सभापति चलाउने क्षमता मसँग छ । मलाई पूर्ण विश्वास छ, म सभापतिमा उठेँ भने जित्छु नै । देशभरका साथीहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिन्छु । समय अझै बाँकी छ ।
तपाईंसँग काङ्ग्रेसलाई अगाडि लैजाने योजना के–के छन् ?
पार्टीभित्र शुद्धीकरण गर्ने, देश विकासको योजना तर्जुमा गर्ने, त्यसअनुसारको पार्टी संरचना निर्माण गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी पार्टीलाई संस्थागत गर्ने, महिला, युवा, दलित, जनजाति र आदिवासीलाई अगाडि बढाउन आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, नेतृत्व विकासका लागि प्रशिक्षण दिने र सशक्त बनाउने योजना छ । यी सबै काम गर्न पार्टीको नेतृत्व तहमा पुग्नैपर्छ । तल्लो तहमा बसेर पूरा गर्न सकिन्न ।
सभापतिमा उठ्न अहिलेको नेतृत्वपङ्क्तिले सहयोग गर्ला ?
उहाँहरूले अब पार्टीका लागि त्याग गर्नुपर्छ । विश्वास छ, मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्छु । वर्षौंदेखि मुख्य पदमा बसेर पार्टी हाँकेकाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार तयार गरेकी पनि छु ।
पदाधिकारी थप्ने वा नथप्ने विषयमा विवाद भइरहेको छ । यसमा तपार्इंको धारणा के हो ? पदाधिकारीमा महिलाका लागि कुनै आरक्षण छ–छैन ?
समयअनुसार पार्टी सङ्गठन परिवर्तन गरेर लैजानुपर्छ । धेरै थपेर काम छैन, तर उपसभापति र सहमहामन्त्री पदमा सङ्ख्या थप्दा पार्टीलाई हित नै हुन्छ । संघियता अनुसार नै पार्टीको संरचना बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा पछाडि पारिएका वर्गले पनि नेतृत्वमा आउने मौका पाउँछन् । आरक्षणका लागि सहमहामन्त्री पद धेरै बनाउँदा पछाडि पारिएको वर्ग अगाडि आउने बाटो खुल्छ । माथिल्लो पदका लागि प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्छ ।
आरक्षणको व्यवस्था भएन भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारीमा महिला आउने सम्भावना कति छ ?
खुला प्रतिस्पर्धाबाट महिला आउने सम्भावना निकै कम छ । मेरो मात्र कुरा गरेर भएन, सिङ्गो पार्टीभित्रको महिलाको कुरा हो । अहिलेलाई महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । काङ्ग्रेसले महिलालाई कहिल्यै पनि अगाडि ल्याउनै चाहेन । पार्टीको नीति नै नभएको कारण काङ्ग्रेसजस्तो पुरानो पार्टीमा महिला पछि परेका हुन् । काङ्ग्रेसको तुलनामा एमाले र एमाओवादीमा केही फरक छ, तर पूर्णचाहिँ छैन ।
राजनीतिमा महिला सहभागिताका लागि तपाईंको पार्टीले गर्न नसकेका कुराहरू के–के हुन् ?
अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसमा महिलालाई निर्णयक तहमा पुग्न दिइएकै छैन । पार्टीका महिला साथीहरू पनि बारम्बार यो कुरा उठाउनुहुन्छ । ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएका महिलालाई अगाडि बढाउँदा काङ्ग्रेस कमजोर हुँदैन भन्ने विचार नेतृत्वको दिमागमै घुसेको छैन । यति लामो इतिहास बोकेको पार्टीमा महिला अगाडि आउन नसक्नुको मुख्य कारण नेतृत्वको कमजोरी नै भन्नुपर्ला । पार्टीभित्र महिला अत्यन्तै खुम्चिएर बसेका छन् । पूरै बेवास्ता गरिएको छ । पार्टीले महिला, युवा, दलित, जनजाति र आदिवासीलाई कहिल्यै पनि अगाडि आउने गरी कार्यक्रम नै ल्याएन । नेतृत्वले जहिले पनि आफूकेन्द्रित योजना बनाउने र कसरी पदमा पुग्ने भन्दा अरू सोचेकै देखिँदैन ।
राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्न र टिक्न नसक्नुको मुख्य कारण के देख्नुभएको छ ?
महिला राजनीतिमा आउन नसक्नुमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र धार्मिक कारणहरू छन् । पहिलो त पार्टीकै नीति हो । पार्टीले राजनीतिमा महिला टिकाइराख्नका लागि विशेष योजना नै बनाएनन् । इतिहास हेर्दा राजनीतिमा लाग्ने सम्पूर्ण ठेक्का पुरुषको जस्तो थियो । सामान्य परिवारका महिला घरबाट निस्किएर राजनीतिमा क्रियाशील हुन त्यति सजिलो थिएन । तर, अहिले पहिलाजस्तो अवस्था छैन । अहिले सशक्तीकरणका लागि लडिरहनुभएको छ ।
गाउँमा महिला स्वस्फुर्त रूपमा सङ्गठिन भएर विकास पनि गर्नुभएको छ । आफूले गरेको कामलाई सानो ठान्नुहुँदैन । घरको काम गरेकोमा महिलाले गर्व गर्नुपर्छ । अर्को कुरा महिलामा आत्मविश्वासको कमी छ । यसले राजनीतिमा क्रियाशील हुन समस्या आउँछ । महिला जबसम्म माथिल्लो निकायमा पुग्दैनन् तबसम्म कसैले कुरा सुन्दैन । माथि पुग्नका लागि एउटा महिलाले अर्को महिलालाई सहयोग गर्नैपर्छ । गिरिजाबाबुले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, ‘पार्टीमा महिलालाई अगाडि ल्याउनु है, होइन भने काङ्ग्रेस छोड्छन् ।’ त्यो कुरा राष्ट्रपतिको चुनावमा देखियो । विद्याजीलाई काङ्ग्रेसबाट पनि भोट गएका छन् ।
पार्टीको आन्तरिक किचलोको कारणले काङ्ग्रेसको हातबाट सत्ता गुम्यो ? त्यसको दोष कसलाई जान्छ ?
पार्टीले राजनीतिक गठबन्धनलाई छोड्नुहुँदैनथ्यो । राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमति तोड्नु नेतृत्वको धेरै ठूलो गल्ती हो । खासगरी देशमा नाकाबन्दी भइरहेको अवस्थामा गठबन्धन तोड्नु बिलकुलै गलत हो । हामीले भर्खरै संविधान बनाएका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु छ । सङ्घीयतामा देश जाँदै छ । त्यसका लागि कस्तो खाका बनाउने भन्ने मुख्य काम बाँकी नै छ । यो अवस्थामा दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर जानुपर्दथ्यो । अरू स्थानीय चुनावमा आफ्नो–आफ्नो बाटो लाग्न सकिन्थ्यो नि । अब जे हुनु भयो, काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बसे पनि देशको विकासका लागि राम्रो भूमिका निभाउनुपर्छ ।
तपाईं पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख हो । नाकाबन्दी खुलाउनेबारेमा पार्टीको तहबाट कुनै पहल गर्नुभएको छ ?
त्यसका लागि मैले सार्वजनिक ठाउँदेखि सम्बन्धित निकायसम्म कुरा गरिरहेकी छु । यो नाकाबन्दीले कसैको पनि भलो गर्दैन । नेपाल अहिले जुन अवस्थाबाट गुज्रिएको छ त्यसले भारतलाई पनि राम्रो गरेको छैन । भारतको संसारभर विरोध हुन थालेको छ । संविधानको विरोध गरेर नाकाबन्दी गर्नु बिलकुलै गलत कुरा हो । यसले गर्दा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध धुमिलिन पुगेको छ । खासगरी नयाँ पुस्तामा भारतप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा गरेको छ । जुन कुरा धेरै समयसम्म रहनेछ । बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।
भारतबाट नभए हामीले जहाँबाट पनि सहयोग लिनुपर्छ । सरकारले त्यो कुरा अगाडि बढाएको पनि छ । त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
साँच्ची ! तपाईंले भूकम्पपीडितलाई घर बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो । त्यो कहाँ पुग्यो ?
घर मात्र होइन, गाउँ नै बनाउने योजना छ । केही सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भइरहेको छ । त्यो छिट्टै हुन्छ होला ।
प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर ४ गते शुक्रवार